शिल्पा पोखरेलको कानको जाली फुटाइदिए श्रीमान् छविराज ओझाले, माइतिको शरणमा शिल्पा - Hulaki Samachar
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/शिल्पा पोखरेलको कानको जाली फुटाइदिए श्रीमान् छविराज ओझाले, माइतिको शरणमा शिल्पा
शिल्पा पोखरेलको कानको जाली फुटाइदिए श्रीमान् छविराज ओझाले, माइतिको शरणमा शिल्पा
1,668 Less thanaminute
काठमाडौं– चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच खटपटको विषय बाहिरिएको छ । लामो अफयेरपछि शिल्पा र ओझाबीच २०७३ सालको दशैँतामा गोप्यरुपमा बिबाह भएको थियो ।
ओझाको कुटपिटपछि शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै शिल्पाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएको जानकारी दिँदै थप प्रहरीमै बुझ्न आग्रह गरिन् ।
यस्तै काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले पनि शिल्पाले उजुरी दर्ता गरेको पुष्टि गरे । श्रीमानबाट असुरक्षा भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा माग गर्दै शिल्पाले उजुरी दर्ता गराएको उनको भनाई छ।
चलचित्र क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार शिल्पाले विकास रौनियारलाई तिहारको टिका लगाएर दाइ मान्दै आएकी छिन् । अहिले उनै दाइको घरमा शिल्पा संरक्षणमा रहेकी हुन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन निर्माता ओझालाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
शिल्पासँग बिबाह गर्नुअघि छविराजका तीन जनासँग बिबाह भइसकेको थियो । शिल्पा चौथो श्रीमतीको रुपमा भित्रिएकी हुन् ।
स्मरण रहोस्, शिल्पालाई चलचित्र क्षेत्रमा ओझाले नै भित्र्याएका थिए ।
बिमा कुमारी दुराले “लमजुङ तुर्लुङ्गकोट” गाउदा पैसै पैसाको फुल र मालाको ओइरो (भिडियो सहित)
म दुईटा श्रीमान राख्छु, मान्छ त समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुई श्रीमान राख्न दिंदैन ?
‘गलबन्दी’मा बेहुला बेहुलीको ऐतिहासिक डान्स, हेर्ने हरुको घुइचो ! (भिडियोसहित)
आकाश र पुजालाई छोरा बुहारी भने पछी सबले विवाहा गराइ दिने भन्दा आकाश लाजले भुतुक्क (भिडियो सहित )